Laacibka Caanka Baxay Ee C. Ronaldo Oo Ka Hadlay Sirta Qaab Ciyaareedjiisa La Holin Waayay . – somalilandtoday.com
Laacibka Caanka Baxay Ee C. Ronaldo Oo Ka Hadlay Sirta Qaab Ciyaareedjiisa La Holin Waayay .
(SLT-Roma) Cristiano Ronaldo ayaa saddex gool u dhaliyey xulkiisa qaraka Portugal kulankii Switzerland ay ku wada ciyaareen wareega afar dhamaadka koobka UEFA Nations League, wuxuuna ku hogaamiyay inay jartaan tikitkooda kulanka kama dambeysta ah.
Hadaba weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa ka warbixiyay sirta ka dambeysa inuu ilaashado awoodiisa jireed, xili da’adiisu ay tahay 34 jir.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu bixiyay Cristiano Ronaldo waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waa sharaf weyn inaan xirto maaliyada xulka qaranka, sida iska cad inaad qeyb ka tahay tartankan, waa arin gaar ah”.
Cristiano Ronaldo ayaa seddexleey ka dhaliyay Switzerland, wuxuuna ku wajihi doonaa Netherlands axada kulanka finalka ee UEFA Nations League. Laacibka reer Portugal ayaana wali qaadanaya qaab ciyaareed aan caadi ahayn.
Ronaldo ayaa ka warbixiyay sirta ka dambeysa bandhigiisa cajiibka ah, xili da’adiisu ay tahay 34 jir wuxuuna yidhi.
“Waa diyaar garoowga iyo anshaxa shaqadeyda, wali waxaan dareemayaa wanaag inkastoo aan ahay 34 jir, waxa ugu muhiimsan ayaana ah maskaxda, dhiirigelinta, iyo farxadda”.
“Waxaan u maleynayaa in weli aan heysto wax badan oo aan ku soo bandhigi karo, waxaana dareemayaa wanaag”.
Intaas kaddib Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu ka hadlay kulanka finalka ee UEFA Nations League ay habeen dambey ku wada ciyaari doonaan Netherlands wuxuuna yidhi.
“Xulka Netherlands waa mid aad u fiican, si fiican ayay u ciyaareen, waxaad ku daawateen kulamadii ugu dambeeyay, waxay heystaan ​​koox weyn oo ay ku sugan yihiin ciyaartoy aad u fiican oo da’ayar ah iyo ciyaaryahano khibrad badan, taasoo ka dhigeysa kuwo xoogan, waan ognahay inay noqon doonaan koox adag, laakiin taasi waa qaabka ugu fiican ee kulan final ah”.